Nin hayey number-ka sirta lacagah lagu kala iibsado Internet-ka oo si lama filaan u geeriyooday… – Hagaag.com
Nin hayey number-ka sirta lacagah lagu kala iibsado Internet-ka oo si lama filaan u geeriyooday…
Posted on 7 Febraayo 2019 by Admin in Dhaqaalaha // 0 Comments
Barnaamijka lacagaha Internet-ka lagu kala sarifo ee Cryptocurrencies ayaa loo tix galiyay inuu yahay mid si aad ah loogu riyaaqay, laakiin halis lama filaan ah ayaa isbuucan laga soo tabiyay dalka Canada.
Dadka maalgashadeyaasha ah ee lacagahooda u dhiibtay shirkadda Quadriga, oo ah tan sameysa adeegga ugu weyn waddankaas ee lacagaha internet-ka lagu sarifo ayey soo wajahday dhibaato ay aad uga walwaleen.
Dadkan oo ay ka maqan tahay lacag tiradeeda lagu sheegay $190 malyan oo doolar ayaan dhaqaalahooda heli karin maadaama la la’yahay lambarkii sirta ahaa ee lagu furi jiray kumbuyuutarrada ay ku shaqeeyaan sanduuqyada dhinaca internet-ka ee ay lacagahooda ku xareysnaayeen.
Xaqiiqdii, waxay u muuqataa in lambarkii sirta ahaa uu qabriga la galay Gerald Cotten, oo ahaa ninkii shirkaddaas aasaasay, kaasoo bishii December si kadis ah ugu geeriyooday waddanka Hindiya.
Cotten, oo 30 sano jir ahaa ayaa hayay mas’uuliyadda ugu muhiimsan ee lagu maamulyayay amaanka lacagtaas, sida ay madaxda shirkadda sheegeen.
Maamulka Shirkaddan ka shaqeysa adeegyada sarrifka lacagaha ayaa 31-kii bishii Janaayo u sheegay maxkamadda sare ee Nova Scotia in aysan awoodin furitaanka sanduuqyada ay lacagta ku jirto.
Warqad ay saxiixday Cotton xaaskiisa oo lagu magacaabo Jennifer Robertson ayaa lagu sheegay in aan la furi karin Laptop ama kumbuyuutarka gacanta ee uu ku shaqeyn jiray seygeeda, kaasoo laga tix raaci lahaa soo celinta lambarka sirta ah.
“Anigoo xitaa marar badan isku daynay inaan raadiyo, wali ma awoodo inaan helo lambar sired meel ku qoran”, ayey warqadda ku tiri Robertson.
Daahitaanka la bixista lacagta
Shirkadda Quadriga oo la maal galiyay 5 sano ka hor ayaa sannadkii lasoo dhaafay la kulantay dhibaatooyin maaliyadeed.
Telefishinka laga leeyahay waddanka Canada ee la yiraahdo CNBC ayaa soo tabiyay in shirkaddu ay heysteen dhibaatooyin dhinaca suuqa ah isla markaana horraantii sannadkan uu bangiga CIBC ka xannibay lacag dhan 20 malyan oo doolar.
Maamulka ayaa isbuucii la soo dhaafay dalbatay in la ceymiyo, iyadoo hadda macaamiishu ay ka cabanayaan daahitaanka lacagaha ay doonayeen iney la baxaan.
Dad ay tiradoodu gaareyso 115,000 oo ruux ayaa isticmaala barnaamijka lacagaha lagu sarrifo ee shirkadda Quadriga.